Mase iPhone in Android? Waxaad soo iibsatay phone cusub Android oo haatan qorsheyneysa in ay beddelaan aad madal ka macruufka in Android? Ama waxa keliya ee sms ka iPhone wareejiyo Android? Halkan waxa ku jira 2 siyaabaha aad ku sms ka iPhone in Android wareejiyo.
Qeybta 1: 1-click kala iibsiga telefoonka ee suuqa kala / Mac
Qeybta 2: Waraaqda sms ka iPhone isticmaalaya Lugood
Qeybta 3: Iyada oo la adeegsanayo wax app ama qalab
Qeybta 4: 3-ada sida iSMS2droid
Wondershare MobileTrans Waa qalab loogu ujeedada kala iibsiga of abuse wac, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, jadwalka taariikhda, photos, music, video iyo barnaamijyadooda u dhexeeya telefoonada Android, iPhone, Nokia iyo xitaa BlackBerry at click hal.
Ka iPhone Bedelka raalli iPhone
Faa'iidada Wondershare MobileTrans waa:
• No network daruur loo baahan yahay
• wareejin karaan dhammaan sawiro ka mid ah sawirrada ka Photo Stream, Photo Library iyo Photo Album
• bedeli karaa xiriirada, wac log, sawiro, fariimaha qoraalka ah, iwm
Talaabooyinka u sms kala iibsiga ka iPhone in Android la mobileTrans Wondershare
Tallaabooyinka waa sida soo socota:
Log galay iCloud
Dooranaysaa Download iCloud kaabta; Waa in aad kala soo bixi ka mid ah liiska
Sida ugu dhakhsaha badan Download waa dhameystiran, geeddi-socodka, ka dib waa ku xira of qalab bartilmaameed Android ay u bilaabaan geeddi-socodka 'Copy'
Riix badhanka Start Coopy iyo aad kala iibsiga ka bilaabi ka dhacaya
Eeg Snaphots kor ku xusan tahay geeddi-socodka.
Qeybta 2: sms Macdan iPhone isticmaalaya Lugood
Tallaabada ugu horreysa waa in la hubiyo in aad iPhone qabo gurmad ah si aad u computer '. Xaaladdan oo kale, aad iPhone waxaa lagu taageeray in iCloud, bedesho fursad u 'Computer Tan iyo guji "Back Up Hadda' doorasho la heli karo. Sida ugu dhakhsaha badan gurmad waxaa loo kaydiyaa aad kombuutarka; aad u baahan tahay si ay u eegaan faylka loo magacaabay 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28. File waa in uu ku yaalaa waddooyinka soo socda, oo ku salaysan version nidaamka Operting ee aad isticmaalayso.
Windows XP ama ka hooseeya
File waa in uu ahaadaa ugu adag drive.Then guji si Documents iyo Settings ka dibna tag username ee PC. Markaasaa waxaa aad looga baahan yahay in guji Codsiga Data, ka dibna riix on Apple Computer. Waa in aad raacdo MobileSync ka dibna kaabta.
Windows 7 ama 8
Mar file jooga OS adag drive, meesha aad ayaa looga baahan yahay si ay u tagaan ee Users iyo dooran aad magacaaga iyo isgarad-tagaan oo ay u soo gudbin AppData waa in. Markaasaa waxaa aad loogu baahan yahay si ay u tagaan qaybta la barqiyey, oo guji Apple Computer. Waxaa loo baahan yahay in aad guji MobileSyncand guji kaabta.
Wixii Mac OS X, file jooga file User waa in. Halkan, waxaa looga baahan yahay si aad u tagto qaybta Library ka dibna riix Codsiga Support, ka dibna tag MobileSync oo guji kaabta.
Qeybta 3: Iyada oo la adeegsanayo app kasta ama qalab
Waayo, kan aad u baahan tahay in aad bareesada iPhone galay PC. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad furaysto in aad iPhone in, aad PC waa in toos ah u bilaabi codsiga Lugood.
• Riix qalab iPhone in dhinaca kore ee midig ee qaybta Lugood.
• Riix "Computer Tani" fursad u heli karaa hoos goobaha 'Location kaabta'.
• dibna riix qaybta kaabta u gurmad dhameystiran ee qalabka kombiyuutarka.
• Hadda Meel file gurmad kombiyuutarka.
• Wixii nidaamka ka hawlgala Windows, faylka guud ahaan hoostiisa / Users / (Username) / AppData / barqiyey / Apple Computer / Mobile nidaameed / kaabta.
Xaaladdan oo kale, aad socda Mac ah, file waa la kaydin doonaa ka yar / (user) / Library / Codsiga Support / Mobile nidaameed / kaabta. Waxaad u baahan tahay riix qaybta ka dibna Tag menu, haddii aad u ma arkaan folder Library in user folder aad.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in aad folder furay timestamp ugu dambeeyay.
Raadi file fariimaha qoraalka. Mid ka mid ah la xasuusto waa in Apple uusan ogolaan habka dhamaystiran si fudud aad u badan iyo sidaas ayaa loo baahan yahay in aad ka shaqayso waxay ku leh uga dhigayeen qaar ka mid ah. Waxaad raadineyso weeyna file soo socda: 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28. Raadi file this galka iyo aad u heli kartaa.
Hadda, Koobiyee faylka si screen desktop computer iyo dhaqaaqo file si midkood xasuusta gudaha telefoonka Android ama kaarka SD ah, haddii qalab aad ayaa booska SD ah. Lacag faylka on desktop-ka caawisaa badbaadinta markii aad isku daydaa inaad ka dib heli.
Bareesada qalab Android aad kuu computer, oo furo midkood Finder (OSX) ama Windows Explorer.
Dhig faylka fariin telefoonka aad Android. File ah, taas oo aad kaalinta on desktop hore, mid ka mid ah goobta foomka of folder ugu weyn ee xasuusta gudaha qalab ama ku gal ugu weyn ee kaarka SD haddii aad telefoonka ayaa waxaa helay Waxaad dhaqaajin karin!
Hel telefoonka aad Android unplugged ka PC.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad caawimaad ka app wax ka qaado si ay u badalaan files ah qaab taageero android.
Apps, taas oo ku iman kartaa in la isticmaalo weyn ujeeddo oo isku mid yihiin sida soo socota:
Download iSMS2droid ka Google Play Platform. Sida aynu wada ognahay in Android aan ka akhrisan kartaa file ah ee ay aad iPhone natively, si aad u baahan tahay Google a Play app si loogu badalo faylka si ah qaab saaxiibtinimo Android. By isticmaalaya telefoonka aad Android, waxaad tagi kartaa dukaanka app iyo download, rakibi app iSMS2droid halkaas ka.
Burcad iSMS2droid markaas ku dhufo "Select iPhone SMS database '.
Just heli file fariimaha qoraalka ah oo ku saabsan qalabka ka walaacsan, ka dibna riix it on.
Riix 'Dhamaan fariimaha qoraalka ee suuqa kala socda, taas oo ka furmay. Tani suuqa kala badalo doonaa qoraalka dhammaystiran qaab la Android-saaxiibtinimo, taasoo guud ahaan file .apk. Waxa kale oo aad dooran kartaa oo keliya qoraallada oo aad jeceshahay in aad soo badan in aad telefoon, Si kastaba ha ahaatee xusuusnow in this qabanayaan waa hab aad u dheer iyo waqti isku mid ah waa shaqo effortful.
Waxaad ka jaftaa kaliya ee 'bilaabi kaabta SMS iyo Soo Celinta', oo aad ka qaadan doonaa liiska Play Google u kaabta SMS iyo Soo Celinta app oo halkaas ka aad ka soo dejisan kartaa.
Ku rakib iyo Burcad kaabta SMS iyo Soo Celinta doorasho App
Tubada Soo Celinta button
Hadda, Meel aad file iSMS2droid, ka dibna tubbada Button ok.
Dooro "Soo Celinta All Messages" iyo Riix badhanka 'OK'.
Sida ugu dhakhsaha badan waa geedi socodka la soo celiyo waa dhameystiran yahay, fariimaha oo dhan iPhone laga heli doonaa qalab aad Android.
App SMS dhoofinta Plus waa ugu fiican ee adeegyada gurmad SMS. Doorashadan ayaa si Print ama Save si PC ama Mac, Save si PDF ama Excel, la xiriir kaabta fariimaha kuwa caqliga leh. Hadda waxa aad u fudud in qor SMS ama fariimo toos ah ka iPhone
Kaabta SMS iyo Soo Celinta waa app fudud Android in Taageeray iyo fariimaha telefoonka ee qoraalka dib u soo celisa.
• Xarunta of Messages SMS kaabta qaab XML.
• kaabta abuuray degaanka qalabka la kala dooran karo si toos ah u geliyaan in ay Email, Google Drive ama DropBox isticmaalaya app dar-on.
• Dooro waqti qorsheeyay in ay si toos ah raad raac.
Phone / iPad / iPod Maaree
A app one stop kuwaas oo kaa caawin doonaan inaad maamusho Wax walba oo aad iPhone, iPad iyo iPod oo waa awood in ay sameeyaan waxa Lugood ma sheegi karo!
The qaababka ugu muhiimsan waxay kala yihiin:
• Kartida ay u gudbiyaan files ka PC iyo Lugood iyo sidoo kale ka iDevice in PC iyo Lugood.
• xarunta Music & wada hadalka video waxaa laga heli karaa oo xitaa videos iyo music loo rogi karaa in qaabab socon aallada macruufka inta ay socoto ee suuqa kala iibsiga.
• Kobigareynta ee Photos dhexeeya PC iyo iDevice iyo sidoo kale doorasho ee la wadaago iyo daabacaadda photos fudayd badan leh.
• Si nidaamsan loo maareeyo xiriirrada ka iPhone: xiriirada Abaabulka, kaabta, doorasho Reeditin, iyo saarista tus iwm
• Wareejinta content kala duwan oo si toos ah u dhexeeya iDevice: files waxaa laga yaabaa in xiriirada, photos, music, fariimaha qoraalka ah, iwm oo si fudud loo wareejin karaa inta u dhaxaysa qalabka kala duwan Apple.
Sida loo Edit iPhone playlist fudud oo dhakhso ah
Sida loo abuuro playlist ku iPhone
> Resource > iPhone > 4 siyaabood oo aad sms ka iPhone wareejiyo android